Sein Lyan - စိ န် လျှံ: May 2016
Writer Sein Lyan Time 5:47 pm2comments: Links to this post
"REBORN" Short Film (9 min)
A young girl who got domestic abuse, dropped out from school. She facesamoral dilemma when her parents want her to work asamaid. After she found out that she has been trading for human trafficking. Her life is completely changed.
အကျင့်စရိုက်ဆိုးတဲ့ မိဘ မှ မွေးဖွားလာသော ကောင်မလေး တစ်ယောက်ဟာ ပညာ တပိုင်းတစ သာ သင်ခွင့် ရခဲ့ပြီး မိဘ ရဲ့ အနိုင်ကျင့် နှိပ်စက်ခြင်းကို အမြဲတမ်း ခံရပါတယ်။ ဒီလို မိဘတွေ နဲ့ နေရတဲ့ ကောင်မလေးဟာ သူတပါး ရဲ့ အမြတ်ထုတ် အနိုင်ကျင့်ခြင်းကို လည်း ခံရပါတယ်။ မိသားစု အဆင်ပြေဖို့ အတွက် မိဘတွေ အလိုကျ အလုပ်လုပ်ဖို့ ရောင်းစားခံလိုက်ရတဲ့ အခါ ဘ၀ဟာ အခြေအနေ ပိုပြီး ဆိုးလာခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ ဘ၀ အပြောင်း အလဲ မှာ သူ မ ဘာ တွေ ဖြစ်မလဲ ဆိုတာ ....
Visit to Reborn Page
Writer Sein Lyan Time 11:42 am No comments: Links to this post
Labels: abuse, children rights, disable rights, ethnic, Human Rights, Human Rights Festival, rape, short film, Women Rights
Writer Sein Lyan Time 11:04 am No comments: Links to this post